Taorian’ny Tabataba, Niezaka Ny Niala Tsiny Tamin’ireo Vondrom-piarahamonina Kristianina Ao Iraka Ny Lehiben’ny Shiita · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Mey 2017 5:55 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, عربي, Español, English
Nampitandrina ny vondrom-piarahamonina Kristianina ao amin'ny firenena (saika tsy dia misy ny vahoaka Jiosy ao Iraka) ny lahatsary efa nivoaka telo taona noho ny fitoviana eo amin'ny fanamarihany sy ny kabary tsara lahatra avy amin'ny vondrona mpikatroka mahery setra ISIS. Tamin'ny taona 2014, rehefa avy nifaoka ny ankamaroan'ny faritra avaratr'i Iraka ny ISIS, niatrika fiantsiana tahaka izany ihany koa ny Kristianina. Maro ny fianakaviana nisafidy ny handositra ny tranon'izy ireo rehefa noterena hisafidy ny fiovana finoana na ny fahafatesana.
Tao anatin'ny ezaka hamaha ny olana eo amin'ny vondrom-piarahamonina roa tonta, nandefa delegasiona ho any amin'ny Brigady Babyloniana, ​​hetsika Kristianina natsangana mba hitaky ny tany very tamin'ny taona 2014 i al-Moussawi, miaraka amin'ny taratasy miala tsiny sy manazava ny tena votoatin'ny lahatsary.
Ny fahatezerana naterak'izany fanamarihana izany dia nitarika fitoriana maromaro an'i al-Moussawi tany am-boalohany, anisan'izany ny fitoriana niara-napetraky ny fianakaviana 180 noho ny “fikotrehana fampirisihana hamely ny Kristianina sy manelingelina ny fimaroana ara-kolontsain'i Iràka.” Na izany aza, nisy ny marimaritra iraisana mba hanatsoahana ny fitoriana rehetra taorian'ny fivoriana ofisialy niarahana tamin'ny delegasiona Kristianina notarihin'i Rayan al-Kildani, lehiben'ny Brigady Babyloniana.
Hatramin'ny nirodanan'ny fitondrana Ba'ath tamin'ny taona 2003, nihena manodidina ny 500.000 ny vondrom-piarahamonina Kristianina ao Iraka noho ny fitomboan'ny sekta raha 1,5 tapitrisa izany teo aloha. Nitatitra tao amin'ny fampahalalam-baovao, Voice of America vatsian'ny governemanta Amerikana ara-bola, namariparitra ny zava-misy marina momba ny fiovam-pinoan'ny kristianina i Rikar Hussein:
Raha nanakorontana manokana ny vondrom-piarahamonina Kristianina ao Iraka ny telo taona lasa, maro ireo naneho ny fanoloran-tenany mba hiverina any amin'ny tranon-drazany ao amin'ny faritanin'i Ninive. Araka ny filazan'i Louis Sako, filohan'ny Fiangonana Kaldeanina ao Iraka, fianakaviana 1.300 teo no eo no te-hiverina haingana ao amin'ny tanànan'izy ireo noafahana, anisan'izany ny ao Tal Usquf, Baqofa, sy Batnaya.